အောင်မြင့်မိုရ်မင်းအာမခံကုမ္ပဏီလီမိတက်၁။ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသော အသက်အာမခံအမျိုးအစားများ ( က ) ပြည်သူပြည်သားအသက်အာမခံ ( ခ ) အားကစားသမားကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအာမခံ ( ဂ ) စုပေါင်းအသက်အာမခံ ( ဃ ) မြွေအန္တရာယ်အာမခံ ( င ) ကျန်းမာရေးအာမခံ၂။ ပြည်သူပြည်သားအသက်အာမခံ ( က ) အသက်ကန့်သတ်ချက် ။ အသက် ၁၀ နှစ် မှ ၅၅ နှစ်အထိ ထားရှိနိုင်သည်။ ( ခ ) အာမခံသက်တမ်း ။ အနည်းဆုံးအာမခံသက်တမ်း (၅) နှစ်ထားရမည်။ ( ဂ ) အာမခံထားငွေ ။ အနည်းဆုံးကျပ်(၅၀,၀၀၀ိ/-)မှအများဆုံးကျပ်(၃၀,၀၀၀,၀၀၀ိ/-) အထိ ထားရှိနိုင်သည်။ ( ဃ ) […]
Money Changer Counter 1. Thein Phyu Counter – No (99/103), Thein Phyu Street, Yangon. 2. Yangon Counter – No (550/552), Merchant Street, Yangon. 3. Chan Aye Tharzan Counter – (78)Street, Between 33×34, Merchant, Diamond Plaza, Mandalay. 4. Naypyitaw Counter – Ngalikechaung bridge, YwarKyauk ward, Pyinmana. ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်း(Saving Deposit Account)တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ နှစ်ဦးနှင့် အထက်တွဲဖက်၍ဖြစ်စေ စာရင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီး အရွယ်မရောက်သေးသူများစာရင်း၊ အသင်းအဖွဲ့ များနှင့်ကုမ္မဏီများ၏စာရင်းများကို ဖွင့်လှစ်ပေးပါသည်။ […]